Golaha Wakiilada Somaliland Oo Cod Gacan Taaga Ku Meel Mariyey Wasiiro Iyo Masuuliyiin Kale Oo Xukuumadda Ka Tirsan Iyo Magacyada Wasaaraddaha Ay Ka Tirsan Yihiin Masuuliyiinta La Ansaxiyey |
Golaha Wakiilada Somaliland Oo Cod Gacan Taaga Ku Meel Mariyey Wasiiro Iyo Masuuliyiin Kale Oo Xukuumadda Ka Tirsan Iyo Magacyada Wasaaraddaha Ay Ka Tirsan Yihiin Masuuliyiinta La Ansaxiyey
Mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta fadhi ay iskugu yimaadeen waxay cod gacan taaga ku meel mariyeen wasiiro,wasiiro ku xigeeno,wasiiru-dawlayaal iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda madaxwayne Siilaanyo isla markaana uu madaxwaynuhu digreeto ku magacaabay.
Waxaana fadhigan saaka oo ay kasoo xaadireen 56 xildhibaan hogaaminayey golaha gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax.
Waxaana xoghayaha guud ee golaha wakiilada Somaliland uu golaha hortooda ka akhriyey taarikh nololeedka xubnahan xukuumadda ka tirsan ee goluhu maanta ansixiyeen.
Intaasi ka dib xildhibaanada ayaa waxay guda galeen ansixinta masuuliyiintan madaxwayne Siilaanyo magacaabay,waxaana ay xildhibaanadu cod gacan taaga ku meel mariyeen masuuliyiintani oo ka koobnaa wasiiro,wasiiro ku xigeeno,iyo wasiiru dawlayaal iyo waliba masuuliyiin kale .
Xubnahan maanta la ansixiyey ayaa waxa ay kala yihiin, Wasiirada Isgaadhsiinta,Dhaqanka,wasiiru dawlaha cadaaladda,wasiiru dawlaha gaashaandhiga,wasiir ku xigeenada madaxtooyada,Hawlaha Guud,Warfaafinta,Dhaqanka,Xidhiidhka golayaasha,ganacsiga iyo waliba gudoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland kuwaas oo dhamaantood madaxwayne Siilaanyo dhawaan digreeto ku magacaabay.